काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी काम दिन्छौं – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी काम दिन्छौं
– पर्यटन मन्त्री ,योगेश भट्टराई
–करिब ८० अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्र, १५ खर्बको लगानी भएको क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा त्यो सबै नोक्सानी नै
छ । २, ४ प्रतिशत कतै खुलेको भए अर्कै होला होइन भने लगभग सबै बन्द छ । स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
–पर्यटन रिभाइभ गर्न सरकारले नै हो खर्च गर्ने । त्यसबाट सरकारलाई अप्रत्यक्ष फाइदा पनि हुन्छ नि । किनभने मानिस तलब लिएर घुम्न जाँदा विभिन्न ठाउँमा खर्च
गर्छन् । होटमा खर्च हुन्छ । त्यो होटलले सरकारलाई ट्याक्स तिर्छ । सामान किन्छ सरकारलाई भ्याट तिर्छ । अप्रत्यक्ष ढङ्गले सरकारको कोषमा पैसा त आउँछ नै । यसरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । केही मानिसले सुझाव दिएका छन् हप्तामा २ दिन बिदा गर्ने । एक दिन घुम्नको निम्ति प्रेरित गर्ने । त्यसो हुँदा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यलाई फाइदा गर्छ । मानौँ काठमाडौँमा बसेको मानिस दुई दिन बिदा भयो भने सौराहातिर घुम्न सक्छ अथवा पोखरासम्म जान सक्छ । पोखरा बसेको मानिस मुस्ताङ जान्छ । यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जान सक्छन् । यस खालको स्किम ल्याउने छलफलमा छौँ ।
नेपालमा जुन रूपमा कोरोना फैलिएको छ भलै सङ्ख्या थोरै छ तर यसो हुनुमा कतिपयले अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान प्रतिबन्ध लगाउन ढिला गर्यौँ । बेलैमा लगाएको भए रोग नेपाल आउँदैनथ्यो होला भनिरहेका छन्, तपाईंहरुले उडान रोक्ने निर्णय गर्न ढिला गरेको भन्ने कुरा स्विकार्नुहुन्छ ?
–हेर्नुस् कुन बेला उडान बन्द गर्नुपथ्र्यो त्यो ठ्याक्कै कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था थिएन । कस्तो अवस्थामा उडान बन्द हुन्छ ? ठूलो सङ्ख्याको सङ्क्रमित पहिचान भइसक्दा पनि भारतमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान बन्द भएन, जतिबेला ५ सयभन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगिसकेको थियो । त्यसपछि बल्ल उहाँहरुले बन्द गरेको हो । हामीले त दोस्रो केस भेटिने वित्तिकै बन्द गर्यौँ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जेजस्तो कदम चालेको छ ती सबै समयमै चालेको छ । हो एउटा पनि सङ्क्रमित प्रवेश गर्न नपाएको भए हामी योभन्दा ज्यादा खुसी हुन्थ्यौँ । तर कोरोना खाली प्लेन चढेर मात्र आएको छैन । सुरुमा मानिसले १४ दिनसम्म अलग बसेभने ठीक हुन्छ भन्ने ठाने तर अहिले ४० दिनपछि पनि त्यसको असर देखिँदैछ । कतिबेला प्लेन बन्द गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुरा अड्कलबाजी गर्ने कुरा हो । तर जुन समयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाका बन्द गर्यौँ सबै सही समयमा बन्द गरेका छौँ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान कहिलेबाट सुचारु होला ?
–पहिलो चरणमा आन्तरिक उडान खोल्छौँ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले सम्पूर्ण ध्यान दिन्छौँ । डिसइन्फेकसन गर्नेदेखि लिएर एयरपोर्टमा हेल्थ डेक्स अझै प्रभावकारी बनाउने, प्रत्येक यात्रुको चेक जाँच गर्ने, कोरोना प्रभावित छैन भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र प्लेन चढ्न पाउँछ । त्यसको प्रोटोकल बनाउँदै छौँ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानमा पनि यही लागू गर्छौं । एयरपोर्टमै आइसोलेसन कक्ष बनाउने, ल्याब कक्ष बनाउने लगायतका गर्नुपर्ने काम गर्छौं ।
अर्थमन्त्रालयले, योजना आयोगले मन्त्रालयहरुको सिलिङ घटाइरहनु भएको छ । नयाँ कार्यक्रम एड्जस्ट गर्न सक्तैनौँ भनेका छन् । तर हाम्रो सोच प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने यसका लागि प्रदेश स्तरमा सहकार्य गरेर बनाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि भएका गन्तव्यलाई स्तरवृद्धि गर्ने अथवा नयाँ गन्तव्य बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाएका छौँ । सय गन्तव्य भनेर तोकिएको छ । विगतमा बजेट गयो । जहाँ राम्रो काम भएको छ त्यहाँ बजेट थपेर पनि दिऊँ जहाँ भएको छैन त्यसलाई हटाउँ भन्ने नीति लिएका छौँ । आउने २ वर्ष्भित्र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनरनिर्माणको काम सक्छौँ । पर्यटकीय पूर्वाधारसम्म पुग्ने भौतिक गन्तव्यको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर बाटो बिजुली त्यहाँको सरसफाइ लगायतका विषयमा ध्यान दिन्छौँ र त्यो खालको बजेट बनाउँछौँ । आउने वर्ष अन्तर्रा्ष्ट्रिय एयरपोर्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गनुपर्नेछ । आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ साथै निगगढ विमानस्थल सुरुवात गर्नुपर्ने छ ।
–विभिन्न कारणले शिलान्यास हुन सकेन । अब आगामी आथिक वर्षमा सुरु हुन्छ । निर्विवाद र लगानीको सुनिश्चितता भयो भने ५ वर्षमा एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउने छ । बस्ती सार्ने काम आन्तरिक समझदारीबाट ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भइसकेको छ । रूख काट्ने विषयमा वन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छौँ । उसले बजेट पनि माग गरेको छ । पहिले रूखको गणना र कति रूख काटिन्छ भन्ने गणना गर्नुपर्नेछ । कोरोना नभएको भए वन मन्त्रालयले सकिसक्थ्यो । अब कोरोना प्रभाव कम हँुदै गएपछि छिट्टै काम सुरु हुन्छ । रातोपाटी बाट